Idizayini yokwakha kanye nengosi yesoftware ye-AutoCAD
Impendulo Esheshayo: Uyengeza kanjani ifenisha kumamodeli we-Revit?
Isigaba: Izincwajana zemininingwane 0
Ngiyengeza kanjani ifenisha ku-Revit 2022? Kuthebhu ethi Faka, chofoza layisha i-Autodesk Family ukuze ulayishe isiphequluli. Kusiphequluli sebenzisa isihlahla sokuphequlula ukuze...
Ikuphi Izakhiwo Zesendlalelo ku-AutoCAD Mac?
Ngizivula kanjani izakhiwo zesendlalelo ku-AutoCAD? Chofoza kwesokudla umdwebo we-CAD, ukhombe Into Yomdwebo we-CAD, bese uchofoza Izakhiwo. Chofoza ithebhu Yesendlalelo. Khetha i...
Impendulo Esheshayo: Ithini ifomu eligcwele le-COM ku-CAD CAM?
Yikuphi kokulandelayo okuwuhlobo oluphelele lwe-CAD? I-Computer-aid design (CAD) iwukusetshenziswa kwamakhompuyutha (noma iziteshi zokusebenza) ukusiza ekudaleni, ekuguquleni, ekuhlaziyeni, noma e...
Uzihlanganisa kanjani izinto ku-Draftsight?
Uyihlanganisa kanjani into? Qondanisa into nezinye izinto Bamba phansi Shift , chofoza izinto ofuna ukuziqondanisa, bese uchofoza...
Ngiyenza kanjani i-SolidWorks ibe yakamuva?
Ngikubuka kanjani okwakamuva ku-Solidworks? Cindezela izinkinobho zomcibisholo wesokunxele noma wesokudla. Ukubuka kuhamba ngokwenani lokukhuphuka elicaciswe okhiye bemicibisholo kokuthi Amathuluzi...
Umbuzo: Ulenza kanjani itafula lomugqa ku-Civil 3d?
Ulenza kanjani ithebula lokuqondanisa ku-Civil 3d? Ukwengeza Amathebula Okuqondanisa Chofoza ithebhu ethi Chasisa Iphaneli yamalebula namathebula Engeza imenyu yamathebula Ukuqondanisa Engeza Umugqa . Ku...
Ingabe i-Internet Explorer 11 iyayisekela i-SVG?
Ingabe i-SVG isebenza ku-Internet Explorer? I-SVG (Scalable Vector Graphics) isekelwa ngokusemthethweni yizo zonke iziphequluli zewebhu eziyinhloko, kuhlanganise ne-Internet Explorer. Ukusekelwa kufaka phakathi ezinhlobonhlobo…
I-STL imele liphi izwe?
Imele ini i-STL *? I-STL. I-STL ifomethi yefayela yomdabu kusofthiwe ye-stereolithography CAD edalwe yi-3D Systems. I-STL yaziwa nangokuthi i-Standard…
Uzibonisa kanjani izakhiwo ezinkulu ku-SOLIDWORKS?
Uzibonisa kanjani izakhiwo ngobuningi? Ungabuka izakhiwo zesisindo esibaliwe.…Ukubonisa izakhiwo ezinkulu: Khetha izinto (izingxenye noma izindikimba eziqinile) ezizohlolwa. … Chofoza...
Ubuzile: Ungakwazi yini ukungenisa i-DXF ku-Solidworks?
Ungakwazi yini ukuguqula i-DXF ibe ingxenye ye-SOLIDWORKS? dxf). Phequlula ifayela, bese uchofoza Vula. Imodeli iguqulwa ngokushesha ibe yingxenye ye-SOLIDWORKS, noma…
1 2 ... 7,795 Olandelayo
Sawubona! Igama lami nginguJohane. Ngingunjiniyela nomklami. Ngifuna ukwabelana ngolwazi lwami kanye namaphuzu abalulekile adingekayo lapho ngiqala noma yikuphi ukwakha.
Ngazi kanjani uma ifayela lami liyi-ANSI noma i-UTF 8?
Ngiwehlisa kanjani umdwebo ku-AutoCAD?
Ubuzile: Kungani ubhejane usho imali?
Ngiphuma kanjani kumodi yokuhlela iqembu ku-Revit?
Ngilulandela kanjani uhlelo ku-AutoCAD?
Umbuzo wakho: Usigcina kanjani isigcawu ku-Solidworks?
Umbuzo wakho: Ngabe amabhubesi adla indle kabhejane?
© 2022 Iphrojekthi Ekhethekile